I-Scribble Live: Uxwebhu, isiCwangciso kunye nokuFezekisa isiCwangciso sakho soMxholo | Martech Zone
Lwesine, Matshi 17, 2016 NgoMgqibelo, Matshi 19, 2016 Douglas Karr
I-ScribbleLive ibhengeze ukumiliselwa kwe Isicwangciso sokuPhilaIsicwangciso-qhinga somxholo kunye nemveliso yocwangciso eyonyusa ukubanakho kweentengiso ukusuka kwisicwangciso ukuya ekuphunyezweni.Ukuqaliswa kweSicwangciso seSribbleLive kukwandisa imveliso yabo yangoku kunye nesoftware yeSaas njengesicelo semveliso esigcweleyo.
Ngokutsho Uphando lwe-CMI / yeNtengiso, Abathengisi abanesicwangciso-qhinga somxholo esibhaliweyo ngama-60% amathuba okuphumelela, kodwa yi-32% kuphela enenye. Isicwangciso senza ukuba abathengisi bakhe kwaye babhale phantsi isicwangciso sabo sokuthengisa kwaye basivumele sikhokele ucwangciso lwabo lwentengiso kunye nokwenza.
Isicwangciso sokuPhila ukungqinelana neenjongo zokuthengisa umxholo ngokuhamba kwabasebenzisi kuthotho lwemibuzo / izigqibo zokuphendula ngexesha lesicwangciso esinceda ukumisela iinjongo / umntu. Ezo ke zibotshelelwe kwimixholo yesiqulatho ukuba senziwe kwaye sidityaniswe kumda wakho wexesha / ikhalenda yokuhlela ukuze wenze izigqibo ezilungileyo zomxholo; ezinje, uthetha nabani, uthetha ntoni kwaye uthetha liphi ijelo.
Isicwangciso soMxholo -Yila kwaye ubhale phantsi isicwangciso-qhinga sentengiso uqinisekisa ukuba singene kuwo wonke umxholo owuvelisayo.
Iinjongo kunye neenjongo -Yakha ii-personas zomthengi, imixholo yomxholo, iindawo ekugxilwe kuzo kunye nokulinganisa ukusebenza komxholo wakho kuthelekiswa neenjongo zakho zobuchule.
Bambisana -Waphule amaqela eesilos kwaye asebenze ngaxeshanye ukwenza isicwangciso-qhinga sakho, kunye nendima yelungu ngalinye echazwe ekucwangciseni ukupapasha.
Yenza kwaye uphumeze -Ukubeka embindini kunye nokuhlengahlengisa ukuhamba komsebenzi, ukunciphisa inani lezixhobo zokuxhasa iinzame zakho zentengiso.
Ikhalenda yokuHlola -Iguquguqukayo kunye nekhalenda yokuhlela enobuntu ukunceda ukuhlela nokulawula umxholo wakho.
Shicilela -Kwi-WordPress kunye nezinye iinkqubo ze-CMS kunye ne-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn kunye neGoogle Plus.
Malunga neScribble Live
Isisombululo esinye se-SaaS sidibanisa isayensi yedatha kunye nesicwangciso somxholo kunye nocwangciso, indalo, kunye nobuchwephesha bokuhambisa ukuhambisa iziphumo zeshishini ezilungiselelwe. I-ScribbleLive isetyenziswa zii-1000 + brand kubandakanya iBhanki yaseMelika, iBayer, iDeutsche Telekom, iFerrari, iOracle, iRed Bull kunye neYahoo!
tags: ikhalenda yokuhlela umxholoiinjongo zomxholoucwangciso lomxholoqhinga lomxholoUmxholo wexeshaikhalenda yokuhlelaabantuunobumbaIsicwangciso sokubhala